ပင်မစာမျက်နှာသမိုင်းကြောင်း ဗမာစာEnglishไทย	Loading...
အဖွဲ့အစည်း အကြောင်း	FED သည် နိမ့်ကျသော အလုပ်သမားများအား လုံခြုံစိတ်ချရ၍ တရားမျှတသော ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုအား ဖန်တီးပေးပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကလေးများနှင့် လူကြီးများအား ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။	ABOUT US	FED providesasafe and equitable environment for underprivileged workers, whilst promoting education and development opportunities for children and adults.
This is our story.	Our Story	philippe	2016-10-21T15:55:22+00:00	သမိုင်းကြောင်း
၂၀၀၄ ခုနှစ် စူနာမီဖြစ်ပြီးမကြာမီတွင် FED အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ လျစ်လျူ ရှုထားခြင်းခံနေရသော ဖန်ငဒေသအတွင်းရှိ စူနာမီဒုက္ခသည် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများကို အရေးပေါ်ကူညီမှုများပေးနိုင်ရန် ပင်မ ရုံးအခြေစိုက်ထားသော စံခရဘူရီမှ ဖန်ငခရိုင်အတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ ၍ ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
FED အဖွဲ့ အစည်းကို ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် ကန်ချနဘူရီခရိုင် ၊ စံခရဘူရီမြို့ တွင် GHRE (Grassroots Human Rights Education & Development)အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်။၂၀၀၄ ခုနှစ် စူနာမီဖြစ်ပြီး မကြာမီတွင် FED အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ထိုင်းအစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ လျစ်လျူ ရှုထားခြင်းခံနေရသော ဖန်ငဒေသအတွင်းရှိ စူနာမီဒုက္ခသည် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများကို အရေးပေါ်ကူညီမှုများပေးနိုင်ရန် ပင်မရုံးအခြေစိုက်နေသာ စံခရဘူရီမှ ဖန်ငခရိုင်အတွင်းသို့ရုံးပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းအချိန်မှစ၍ FED အဖွဲ့ အစည်းမှ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။ FED ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများ နေထိုင်ကြရာ ပတ်ဝတ်ကျင်များဖြစ်သည့် ရာဘာခြံများ ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ နှင့် အကျွမ်းတ၀င် ဆက်စပ်မှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ နိစ္စဒူဝဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲပြဿ နာ အခြေအနေများကို မလွတ်တမ်းလေ့လာသိရှိခွင့်ရနေပါသည်။ FED ၏ ၀န်ထမ်းအများစုသည်ပင် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများဖြစ်ကြပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတို့ ၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုများကို ကောင်းစွာ သိရှိနားလည်သူများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် FED အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် တခြားအစိုးရမဟုတ်သည့် NGOs အဖွဲ့ အစည်းကြီးများ မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အောက်ခြေအဆင့်ထိ ထဲထဲဝင်ဝင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် အောက်ပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ၇ ခု ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာကလေးများအား ပညာသင်ကြားပေးခြင်း။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်စားသောက် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်သော် လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေနှင့်အညီ လုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်နိုင်ရန်သော်လည်းကောင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ။ရွှေ့ ပြောင်မြန်မာကလေးများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်အသစ် ဖန်တီးပေးခြင်း။ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအကြား ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်ရှိသော ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် တရားမျှတမှု နှင့် လူမှုဘ၀လုံခြုံ မှုများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများကို လူအခွင့်အရေး အသိပညာ၊ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ၊ လူမှုရေး နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သင်တန်းများ ပို့ ချပေးခြင်း။ ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ ဘ၀အခြေအနေ တိုးတက်မြှင့်မားမှုရှိစေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးပါ။
်ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာ လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် FED အဖွဲ့ မှ အမျိုးသားရေးစံ တစ်ခုတည်ဆောက်ရင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တချိန်က မျက်ကွယ်ပြုခံရသည့် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအရေး ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်လာစေဖို့FED အဖွဲ့ မှ ဖော်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ထိုင်းပြည်သူလူထု၏ စိတ်နေသဘောထားနှင့် အမူအကျင့်များကို ပြောင်းလဲလာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တဖက်မှာလည်း မျိုးဆက်သစ် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကာလအတန်ကြာ မရရှိခဲ့ဖူးသည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိလာအောင် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့FED အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မိမိတို့အဖွဲ့ အစည်း၏ ချဉ်းကပ်မှုနည်းဗျူဟာ
လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ လူအခွင့်အရေးများနှင့် စီးပွါးရေး အခွင့်အလမ်းများ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာဆုံးရှုံးနေသော ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် ထိုင်းလူမျိုးများအကြား ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် FED မှ ကြားဝင်ညှိနှိုင်း ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း။
အခွင့်အလမ်းများနှင့် အကျိုးရလဒ်များကို စောင့်ဆိုင်းမျှော်ကိုး နေမည့်အစား မိမိတို့အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာလူထုအား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။ ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာလူထုထဲမှ မိမိတို့ သင်တန်းပေးထားသည့် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများကို FED ၌ ၀န်ထမ်းအဖြစ် ခန့် အပ်ထားပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားလူထုကြားထဲသို့ ရောက်သည့်အထိ ဦးဆောင်မှုပြုနိုင်ရန် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုစွမ်းရည်သင်တန်းများကို ပို့ ချပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များတွင် အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် မျှော်လင့်ထားသည်မှာ ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်စဉ် စွမ်းရည်မြှင့်တက်လာစေပြီး ပို၍ကောင်းမွန်သည့် ဘ၀အခြေအနေကို ရရှိစေရန်နှင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိလာသည့်အခါ အမိနိုင်ငံ၌ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များရရှိစေဖို့ငှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။ ကျောင်းပညာ သင်ယူနိုင်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ နှင့် သင့်တော်သည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေးအတွက် FED အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ဒေသခံအစိုးအရများ၊ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်များ ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၊ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိုင်း နှင့် မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်း နှစ်ခုကြား ကွာဟနေမှုအပေါ် FED မှ တရားဝင် ထိရောက်သည့် ယန္တရားတစ်ခု ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းကူးတံတား ခင်းကျင်းပေးသည်။ တဖက်တွင်လည်း ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအား အကာအကွယ်ပေးသည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာများ ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှိလာစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းဥပဒေမှ အချိန်ကာလာကြာမြင့်စွာ လျစ်လျူ ရှု့ထားသော လူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုများကို ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ၄င်းတို့ အရေး ထင်သာမြင်သာဖြစ်လာစေဖို့ ရန် FED အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းမြန်မာများ အများဆုံးနေထိုင်သော ခရိုင်များတွင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ FED သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော တရားဝင် မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ နေရာ အနှံ့ အပြားတွင်ရှိသော တခြားသော တရားဝင်မဟုတ်သော မြန်မာအဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု အနေဖြင့် ရပ်တည်ဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးပါ။
ပုံမှန်စာနယ်ဇင်း လက်ခံခြင်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း
ဝန်ထမ်းများ နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
နိုးကြားတက်ကြွသော မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည့် ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းများသည် FED ၏ အသည်းနှလုံးပင် ဖြစ်သည်။ အများစုသော ဝန်ထမ်းများမှာ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများဘဝနှင့် တူညီသော ဘဝအခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သူများ ဖြစ်သောကြောင့် FED အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ အရေးအတွက် အခြေခံအထိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးပါ။
ကျွန်တော်တို့ ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများ (အလှူ ရှင်များ)
ကျွန်တော်တို့ ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အကူအညီမပါပဲ ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အား ကူညီသော လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများအား အစဉ်ထာဝရ ကျေးဇူးတင်နေပါမည်။